Genocide မြောက်,မမြောက် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ် – CRM
Genocide လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူအတော်များများကခေါင်းထောင် ကြည့်ကြလေ့ရှိတယ်။ မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးလည်းဖြစ်သွားလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ Genocide ဆိုတဲ့ term ကို သုံးစွဲပုံသုံးစွဲနည်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံတွေ မတူကြဘူး။
လူအများစု နားလည်တဲ့ Genocide
Genocide ဆိုတာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တာ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ရန်ဘက်လူမျိုးက အများကြီးမျိုးပြုတ်အောင် သတ်ပစ်တာ။ ဒါက သာမန် လူတန်းစားနားလည်ထားတဲ့ Genocide ။
ဥပဒေအရ Genocide ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဒီအမြင်ဟာ သိပ်ကို အပေါ်ယံဆန်ပေမယ့် သာမန်လူတန်းစားရဲ့ အမြင်ဟာလည်း လျစ်လျူရှုလို့တော့မရဘူး။ သာမန်လူတန်းစားဆိုတာ လူအများစုဖြစ်လေ့ရှိပြီး Genocide လို့အသံကြားတာနဲ့ မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးနဲ့ ထကြည့်တာလည်း သူတို့ပဲဖြစ်လေ့ ရှိတာမို့ သာမန်လူတန်းစားတွေရဲ့ အပေါ်ယံနားလည်ထားမှုကိုလည်း လျှော့တော့မတွက်နဲ့ဗျို့။
နိုင်ငံရေးသမားများ Genocide ကို သုံးစွဲပုံ
သူတို့ကတော့ အမှန်တကယ် Genocide ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံကို နားလည်ကောင်း နားလည်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးသမားအများစု Genocide လို့ သုံးစွဲရခြင်းရည်ရွယ်ချက်က ဥပဒေကြောင်းအရ လမ်းဖောက်တာထက် အပေါ်
မှာရေးထားတဲ့ သာမန်လူတန်းစားကိုလှုပ်နှိုးဖို့ မီဒီယာမှာ ဝုန်းဒိုင်းနဲ့ ပွဲဆူသွားစေဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ပိုများလေ့ရှိတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ဒီလို လက်လွတ်စပယ် သုံးစွဲမှုကြောင့်လဲ အမှန်တကယ် Genocide ဆိုတာရဲ့ လေးနက်မှုကို လူတွေက ဖော့တွက်ကုန်ကြတာ။ ဒါ့ကြောင့် Genocide လို့ ပါးစပ်က ထွက်ပြီးရင် တရားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်အောင် ဆွဲတင်နိုင်မှ အဲဒီလူဟာ တာဝန်ကျေတယ်။ မီဒီယာပေါ်မှာတင် ဒစ်လည်နေရင် အဲဒါ ပေါ်ပင်လိုက်တာ။
နိုင်ငံတကာ ဥပဒေက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသော Genocide = Legal Genocide
တခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ မတူတာက Genocide ကို ဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာ တကမ္ဘာလုံးအတူတူပဲ။ UN မှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ Genocide Convention ကိုပဲ တကမ္ဘာလုံး လက်ခံတယ်။ ICC ရုံးတော်ကလည်း UN ရဲ့ Genocide Convention အတိုင်းပဲ တိုက်ရိုက်ယူသုံးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Genocide ကို ဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း ဆိုတာ Genocide Convention ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပဲ။
သီအိုရီအရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသော Genocide
ဒါကကျတော့ တအားကျယ်ပြန့်သွားပြီ။ Genocide Convention ရဲ့ဖခင် Dr.Raphael Lemkin ကိုယ်တိုင်က Genocide ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ပုံစံ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေ ကစပြီး အမှောင်ခေတ် ဥရောပတိုက်မှာ သတ်ဖြတ်မှုတွေအလယ် ဆိုဗီယက် အစိုးရရဲ့ အစုလိုက်အပြုံ လိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင် နာဇီတွေရဲ့ ဟိုလိုကော့စ်အဆုံး နှစ် ၇၀၀၀ စာလောက်က ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု အနိုင်ကျင့်မှု လူသတ်ပွဲ သမိုင်းတွေကို လေ့လာပြီး ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ theory တွေ။
ဒီ theory တွေကို Dr.Lemkin ရဲ့နောက်ပိုင်း Genocide Scholar တွေက ထပ်ဖြည့်ကြတာရှိပေမယ့် ဒီ theory ရဲ့ အခြေခံစဉ်းစားပုံက မပြောင်းလဲဘူး။ theory အရ Genocide ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံရဲ့ အခြေခံက “မနုသလူသား (Homo sapiens) အနွယ်ဝင် သတ္တဝါမျိုးနွယ်အစုအဖွဲ့ တစ်ရပ်၏ ရှင်သန်နေထိုင်ဖြစ်တည်မှုအား အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက် လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် လုပ်ဆောင်သော မည်သည့်လုပ်ရပ် ကိုမဆို Genocide လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်” ဆိုတာမျိုးဗျ။
ဒီနေရာမှာ မနုသလူသားအနွယ်ဝင် သတ္တဝါမျိုးနွယ် အစုအဖွဲ့ဆိုတာ လူမျိုးရေးအရ သွေးသားတူညီမှုအရ ဘာသာရေးအရ အသားအရောင်အရ စုစည်းတည်ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို နိုင်ငံရေးခံယူချက်တူညီမှုအရ လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာခံစားချက်တူညီမှုအရ စုဖွဲ့တည်ရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကတော့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုကို လုံးဝမရှိစေချင်တာကနေ ရှင်သန်ရပ်တည်တဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲသွားစေ ချင်တာ ပုံပျက်သွားစေချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ – ဂျစ်ပစီလူမျိုးတွေက ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ဂစ်တာတီးတော် တယ်ဆိုပါစို့။ နေ့စဉ်ဂစ်တာတီးပြီး ပိုက်ဆံရှာတယ်။ ဂျာမန်လူမျိုးတွေက တယော ထိုးတော်တယ်။ ဒီတော့ ဂျစ်ပစီတွေ ဂစ်မတီးရဘူး တယောပဲထိုးရမယ်လို့ ဂျာမန် အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ထုတ်ရင် သီအိုရီအရ အဲဒါ Genocide ပဲ။ Cultural Genocide လို့ခေါ်တယ်။
ဂျစ်ပစီတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုပုံပျက်အောင် ယိုယွင်းအောင်လုပ်တာ၊ ဂျစ်ပစီတယောက်ကိုမှ မသတ်ဘူး။ သွေးတစ်စက်မှ မထွက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ Genocide ပဲ။ ဒါဆို ဂစ်တာမတီးခိုင်းပဲ တယောပြောင်းထိုးခိုင်းတာနဲ့ ICC တင်လို့ ရပြီလား? NO ! မရဘူး။ ဒါက သီအိုရီအရ Genocide လို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတာ။ Legally = ဥပဒေကြောင်းအရ Genocide လို့မှ မသတ်မှတ်နိုင်သေးတာ။ ဒါဆို Cultural Genocide = ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းအရ ယိုယွင်းပျက်ဆီးအောင်လုပ်တဲ့ Genocide တွေအားလုံးကို ICC တင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူး။
Cultural Genocide ရဲ့ အမြင့်ဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးက ကလေးတွေကို နောက်လူမျိုးတစ်စုက အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံး (သိမ်းငင်) လွှဲယူလိုက် တာကျတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ Genocide ဖြစ်သွားပြီ။ လွှဲယူပစ်လိုက်တဲ့ ကလေးတွေကို တယောက်မှ မသတ်ဘူး။ ထမင်းကျွေးတယ်၊ အဝတ်ဆင်ပေးတယ် စာသင်ပေးတယ်။ စကားသင်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ မူရင်းစာပေ မူရင်းဘာသာ စကားမဟုတ်တော့ဘူး။ ရန်ဘက်လူမျိုးရဲ့ စာပေစကားဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒါဆို ICC တင်လို့ရပြီ။
နားလည်ထားဖို့က Theory အရ genocide ထဲကမှ သမိုင်းမှာ လက်တွေ့အဖြစ်အများဆုံး အရေးယူဖို့ အလိုအပ်ဆုံးအပိုင်းတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီး Genocide Convention ကို ပြဌာန်းထာတာ။ Genocide Convention ဟာ လက်တွေ့ အသုံးချ apply သဘောဆောင်တယ်။
Genocide ရာဇဝတ်မှုမြောက်,မမြောက်ကို Genocide Convention နဲ့သာ ချိန်ထိုးသုံးသပ်စီရင်တဲ့ အတွက် လေ့လာကြစို့။
Genocide is defined in article II of the Genocide Convention as the commission of certain prohibited acts ‘with intent to destroy, in whole or in part,anational, ethnical, racial or religious group, as such’. The prohibited acts are:
Genocide Convention ကို မြန်မာလို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမလဲ ?
Genocide Convention ကို မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို၍မရပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာပြည်တွင် Genocide Convention ကို အခြေခံ၍ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေမရှိပါ။ Genocide Convention ပါ စာလုံးများသည် အင်္ဂလိပ်စာသပ်သပ် မဟုတ်ပါ။ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြဌာန်းထားသောစာလုံးများဖြစ်သောကြောင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဥပဒေသက်ရောက်မှုအင်အား ပါကိုပါရပါမည်။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်လိုက်သောစာလုံးများသည် မူရင်း Convention ပါ စာလုံးများနှင့်ထပ်တူ ဥပဒေကြောင်းအရသက်ရောက်သော အင်အားမပါရှိနိုင်ပါ။
Genocide Convention ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းလည်း မဟုတ်သလို သည်၏ မရွေးဘာသာပြန်မှာလည်း မဟုတ်ပါ။ စာရှေ့ဆက်ဖတ်လို့ရရုံသာ ဘာသာပြန်ပါသည်။ Genocide Convention ကို အစအဆုံး အလျားလိုက်ဘာသာပြန်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ အခုဟာက အရေးကြီးတဲ့ point လောက်ကိုပဲ ဘာသာပြန်တာပါ။
လူမျိုးရေးအရ၊ ဘာသာရေးအရ၊ တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်မှုအရ စုဖွဲ့ တည်ရှိသော မနုဿလူသားအဖွဲ့အစည်း (လူ့အဖွဲ့အစည်း) တစ်ရပ်အား အလုံးစုံ ဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (အောက်ပါ) တားမြစ်ထားသော လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်လျှင် (တရားဥပဒေကြောင်းအရ) Genocide အထမြောက်သည်။
(က) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ အဖွဲ့ဝင်များအား သတ်ဖြတ်ခြင်း
ဒီနေရာမှာရော နောက်အပိုဒ်တွေအတွက်ပါ နားလည်ထားရမှာက သတ်ဖြတ်ခံရသူသည် မောင်ဖြူမို့လို့ မောင်နီမို့လို့ သတ်ဖြတ်ခံရတာ မဟုတ်ဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်ဖြတ်ခံရတာ။
ဥပမာ – ဂျူးဖြစ်လို့အသတ်ခံရတာ၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့အသတ်ခံရတာ စသဖြင့်…။
(ခ) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ အဖွဲ့ဝင်များအား စိတ်ပိုင်းနဲ့ ရုပ်ပိုင်း ပြင်းထန်သော ထိခိုက်နာကျင်စေမှုတို့ကို ဖြစ်စေခြင်း။
ထပ်ပြီး ပြောစရာရှိလာတာက “စိတ်ပိုင်း ထိခိုက်နာကျင်စေမှု” ဟာ ဘယ်လို ပုံစံလဲလို့ တိတိကျကျ ဖော်ပြဖို့ခက်တယ်။ နောက်ပြီး “ပြင်းထန်သော” ဆိုရာမှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာလဲဆိုတာလည်း တိတိပပသတ်မှတ်ဖို့ ခက်
တယ်။ ဒါတွေဟာ တရားသူကြီးတွေရဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဂွင်ထဲက ကိစ္စတွေ။
(ဂ) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုဖြစ်စေရန် တွက်ချက်အကွက်ချ၍ ယင်းတို့၏ ဘဝရပ်တည်မှု အခြေအနေများအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ထိခိုက်စေခြင်း။
ဒီကိစ္စက သတ်ဖြတ်မှုပြီးရင် အဖြစ်အများဆုံးပုံစံပဲဗျ။ ဆေးကုမရအောင်လုပ်တာ။ စပါးစိုက်မရအောင်လုပ်တာ၊ သောက်ရေသုံးရေမရှိအောင်လုပ် တာကနေ အိမ်နံရံကာခွင့်မပေးတာအထိ အမျိုးမျိုးပါဝင်တယ်။
(ဃ) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အတွင်း မွေးဖွားမှုများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နည်းလမ်းညွှန်ကြားချက်များ ချမှတ်ကျင့်သုံးခြင်း။
(င) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပိုင်ကလေးငယ်များအား အခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့(အတင်းအဓမ္မ) အင်အားသုံးစွဲ၍ လွှဲပြောင်းပစ်ခြင်း။
ဒီနေရာမှာ “အင်အားသုံးစွဲ၍” ဆိုတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ ဆိုတာလဲ တရားသူကြီးတွေရဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဂွင်ထဲမှာရှိတယ်။
(က) ကနေ (ဃ) ကျူးလွန်ခံရတာက ရိုဟင်ဂျာတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကလေးမွေးဖွားမှုကန့်သတ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ပြဌာန်းထားတယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ၄ ခုမှာ ၁ ခုပါတဲ့ ကလေးမွေးဖွားမှု ကန့်သတ်ရေးဥပဒေ။ လက်ရှိ
အစိုးရကလည်း အဲဒီဥပဒေကို မဖျက်သိမ်းဘူး။ ဒေသန္တရ ဥပဒေထုတ်ပြီး တားမြစ် နေတာကတော့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ရှိပြီ။
(င) ဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေကိုလွှဲပြောင်းယူတာကျ တိုင်းရင်းသားလို့ ခေါ်ခံရပြီး ဂျင်းအထည့်ခံနေရတဲ့ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ကရင်တွေကို လုပ်တယ်။ တောင်တန်းဒေသတွေမှာ စီးပွားရေးကြပ်တည်းအောင် တောက်လျှောက် လုပ်ထားတယ် ။ အစိုးရက ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြု အဖွဲ့တွေလွှတ်ပြီး ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးတွေကို သိမ်းသွင်းတယ်။ ဒီနေရာမှာ အင်အားသုံးတယ်ဆိုတာကို သေနတ်နဲ့ထောက်ပြီး ကလေးတွေကို လုယူမှ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးအင်အား၊ လူမှုရေးအင်အားတွေကိုပါ ထည့်သွင်းသုံးသပ် ရတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်နေကြောင်း ပေါ်ပေါက်ရင် cultural genocide ရဲ့ အမြင့်ဆုံးပုံစံ ကိုကျူးလွန်ကြောင်း သက်သေရမှာပဲ။ အဲဒီအခါကျရင် တိုင်းရင်း သားဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်လို အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ယန္တယားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမှာပဲ။
ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကို စီရင်ရာမှာ Genocide Convention နဲ့ ချိန်ထိုး စီရင်တယ်။ ဒီလို ချိန်ထိုးစီရင်ဖို့ အမှုတွဲတည်ဆောက်ရာမှာ အခြေခံပါဝင်တဲ့ မဏ္ဍိုင် ကြီးတွေရှိတယ်။ ဒီမဏ္ဍိုင်တွေမပြည့်စုံရင် အမှုတွဲတည်ဆောက်လို့မရဘူး။ ရာဇဝတ်ကောင်တွေဘက်ကလည်း အဲဒီလို အမှုတွဲတည်ဆောက်လို့မရအောင် ဥပဒေကြောင်းအရရော ဖြစ်စဉ်ကြောင်းအရပါ ပြင်ဆင်ထားလေ့ရှိတယ်။ အဖိနှိပ်ခံတွေဘက်က တချို့ကို လူမွေးပြီးဖျက်မြင်းလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို မဏ္ဍိုင်တွေ တည်ဆောက်မရအောင်လုပ်တာ။ ဥာဏ်တိမ်တဲ့ အဖိနှိပ်ခံတွေဆိုရင် ရာဇဝတ် ကောင်တွေရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်သွားလေ့ရှိတယ်။
ဒီတော့ ဥာဏ်မတိမ်ရအောင် မဏ္ဍိုင်တွေကို လေ့လာကြစို့ရဲ့။
မဏ္ဍိုင် ၄ သွယ် အမှုတွဲ
၁။ အကျူးလွန်ခံရသူများ (သို့) သတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲနှိပ်ကွပ်ခံရသူများ။
အမှန်တော့ ဒီမဏ္ဍိုင် ၄ ခုဟာ Genocide Convention မှာပါပြီးသားပါပဲ။
၁။ အကျူးလွန်ခံရသူများ (သို့) သတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲနှိပ်ကွပ်ခံရသူများ
ရှေ့က ရေးထားတဲ့အတိုင်း အကျူးလွန်ခံရသူဟာ မောင်နီမို့လို့ မောင်ဖြူမို့လို့မဟုတ်ဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့။ ဘယ်လိုလူ့အဖွဲ့ အစည်းလဲဆိုတော့ လူမျိုးရေးအရ၊ ဘာသာရေးအရ၊ တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်မှုအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း။
ဒါဆို ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲ စုဖွဲ့ ဖြစ်တည်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရော မရှိဘူးလား…? ရှိတာပေါ့! ဥပမာ-လူတန်းစားအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း (လယ်သမား၊ အလုပ်သမား စသဖြင့်)ဆိုဗီယက်မှာ လီနင်နဲ့ စတာလင်ခေတ်က လယ်သမားတွေဆီကစိုက်ပျိုး ရသမျှသီးနှံတွေကို ကွန်မြူနစ်အစိုးရက သိမ်းဆည်းသွားဖူးတယ်။ ငတ်ပြတ်ပြီး လယ်သမားသန်းချီ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ Genocide မြောက်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ Dr.Lemkin လက်ထက်ကတည်းက မေးခွန်းပါ။
Theory အရတော့ လုံးဝ Genocide ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Genocide Convention ပြဌာန်းဖို့လုပ်တော့ ကွန်မြူနစ် အုပ်စုဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုရဖို့အတွက် အဲဒီလို လူတန်းစားကွဲပြားမှုအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကျူးလွန်မှုကို Genocide လို့နာမည်မတပ် ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စပါ။ ဒါဆို လူတန်းစားကွဲပြားမှုအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ Genocide Convention အရ အကာအကွယ်အပေးမခံရတော့ပါဘူး။
မှန်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အကာအကွယ်မပေးဖြစ်တဲ့ အုပ်စုတစ်စု ကိုထပ်ကြည့်ပါ။
နာဇီတွေဟာ ဂေးတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်သတ် ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂေးဖြစ်လို့ကို လုပ်တာပါ။ ဒါဟာ Genocide လားဆိုတော့ Theory အရတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Genocide Convention မှာတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်အရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကာအကွယ်ပေးမထားပါဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာပါ။ Genocide Convention ဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ Genocide Convention ပါ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်မှုအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျူးလွန်မှပဲ ဥပဒေကြောင်းအရ Genocide မြောက်ပါတယ်။
ဒါဆို အခြားသောပုံစံနဲ့ စုဖွဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက အကာအကွယ်မဲ့ပြီပေါ့….? အဲလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Genocide Convention က အကာအကွယ်ပေးမထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို Crimes against Humanity က အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။ Crimes against Humanity မှာတော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လူ့အဖွဲ့အစည်း လို့ ကန့်သတ်မထားပါဘူး။ မည်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေ စနစ်တကျနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျူးလွန်မှုတွေရှိလာရင် Crimes against Humanity မြောက်ပါတယ်။
Crimes against Humanity ဟာ Genocide Convention က အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ တိုင်းသူပြည်သားဖြစ်မှုအရ စုဖွဲ့ဖြစ်တည် တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒါဆို အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျတော့ ဥပဒေနှစ်မျိုးလုံးက အကာအကွယ်ပေးထားတာပေါ့….? ဟုတ်ပါတယ်။ နှစ်ထပ်ကွမ်း အကာအကွယ်ပေးထားတာပါ။ ဥပဒေ နှစ်ရပ် overlap ဖြစ်တဲ့ point တွေမို့ densed area လို့ခေါ်ပါတယ်။ densed area တွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ စီရင်ရာမှာ Cimes against Humanity နဲ့ စတင်စစ်ဆေးရင်း Genocide မြောက်စေသော အခြားအချက်အလက်တွေနဲ့ က်ိ်ုက်ညီလာရင် Genocide ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် ဆက်လက်စစ်ဆေးရပါတယ်။
ငါတို့ကို ICC မှာတင်ထားတာ Genocide နဲ့ မဟုတ်ဘူး။ Crimes against Humanity နဲ့ပဲလို့တွေးပြီး ကြည်နူးနေတဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေ ကြပ်ကြပ်သတိထားပါ။ ခင်ဗျားတို့ဟာ densed area ကိုမှ ကျွံပြီးဝင်သွားတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
– မြေပြင်အောက်ခြေအဆင့်မှာ လူသတ်၊ မီးရှို့၊ မုဒိန်းကျင့်သူတွေအပါအဝင်။
– အဲလိုလုပ်ဖို့ တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးသူ။
– စီမံချက်အား ငွေကြေး ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးသူ
– ဘေးကနေ ( အမုန်းစကား ) ဝါဒဖြန့်ပေးသူအထိ
ကျူးလွန်သူတွေကို တရားစီရင်ရာမှာ အခက်အခဲတချို့ရှိပါတယ်။ ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာ ကျူးလွန်စဉ်အတွင်းမှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ လှုံ့ဆော်သတ်ဖြတ်မီးရှို့ခဲ့သလောက် အရေးယူခံရတော့မယ်လို့သေချာချိန်မှာ အထောက်အထားတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပါတယ်။ တာဝန်ယူရတဲ့ ရာထူးအဆင့်တွေကို ရွှေ့ပစ်တာ၊ ပြောင်းပစ်တာ၊ ဖြုတ်ပစ်တာတွေလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တရားခံအချင်း ချင်းလည်း လက်ညှိုးထိုးပုံချပြီး အမှုပေါ့အောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ စီရင်ချက်ချရာမှာ ဘယ်သူဟာ အဓိကတာဝန်ရှိလဲဆိုတာကို ဝေဝါးစေဖို့ အားထုတ်တာပါ။ ဒါဟာ နာဇီတရားခံ ဟင်းမလားကစပြီး အခုထိ အောင်လုပ်တတ်တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေပါ။ (ဟင်းမလားဆိုရင် ဟစ်တလာသေခါနီးမှ နာဇီပါတီကနေ ထုတ်ပယ် ခံရတယ်လို့ ဇာတ်လမ်းဆင်လိုက်ပါသေးတယ်။)
အာဖရိက,က ဇူလူးတွေနဲ့ ဝင်ရိုးစွန်းက အက်စ်ကီးမိုးတွေကြားမှာ Genocide ဖြစ်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ Genocide ဖြစ်လာရင် ပြုလုပ်သူနဲ့ ခံရသူ (နှစ် ဖက်)လူမျိုးတွေဟာ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဘယ်လောက်ပဲရန်လိုမုန်းတီးနေပါစေ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ နှစ်ပေါင်းမနည်း ပတ်သတ်ဆက်နွယ် အမျိုးတော် နေလေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ-ဆာဘ်တွေနဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေ။ ကျူးလွန်တဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ အော်သိုဒေါက်စ်တွေဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်ခံရတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ် သူတွေဖြစ်ပေမယ့်ဒီလူမျိုးနှစ်မျိုးဟာ တအားကြီးကွဲပြားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆာဘ်နဲ့ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာသာစကားတွေကို အပြန်အလှန်နားလည်ဖို့လွယ်သလို အပြန်အလှန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့တာတွေလည်း အများအပြားပါ။ မင်္ဂလာပွဲ ဆယ်ပွဲရှိရင် တစ်ပွဲက လူမျိုးမတူဘဲ လက်ထပ်တဲ့နှုန်းပါ။ ဒါကြောင့် ဘာလူမျိုးလဲလို့မေးရင် ဆာဘ်၊ ဘော့စ်နီးယန်းလို့မဖြေဘဲ ယူဂိုဆလာဘ်(ပြည်ထောင်စု)လူမျိုးလို့ ပြန်ဖြေသူက သန်းခေါင်စာရင်းရဲ့ ၁၀ % ရှိပါတယ်။
ဂျင်နိုဆိုဒ်ဖြစ်လာတော့ အဲဒီပြည်ထောင်စုလူမျိုးလို့ပြန်ဖြေတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ဆာဘ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ မုဒိန်းသားကောင်တွေဖြစ်လာရပါတယ်။ ဆာဘ် တပ်ဖွဲ့တွေက “နင်တို့ သွေးနှောချင်ဦး၊ အမျိုးကိုမစောင့်ရှောက်ချင်ဦး” လို့ ခြိမ်းခြောက်ကြွေးကြော်ပြီး မုဒိန်းကျင့်ကြပါတယ်။ ဆာဘ်သွေးပြန်လည်လွှမ်းမိုးသန့်စင်ဖို့ အားထုတ်တဲ့အနေနဲ့ မုဒ်ိန်းကျင့်တာပါ။
မုဒိန်းအကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလည်း ဆာဘ်သွေး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပါပြီးသားပါ။ ဒါဆို ဆာဘ်သွေးပါသူတွေကို ဆာဘ်တွေက မုဒိန်း ကျင့်တာပဲ။ ဘာကိစ္စ Genocide ဖြစ်ရမှာလဲ။ အုပ်စုဖွဲ့မုဒိန်းမှုပဲမဟုတ်လားလို့
မေးခွန်းထွက်လာပါတယ်။ ဒီမှာတင် မုဒိန်းအကျင့်ခံရသူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယူဂိုဆလာဘ် လူမျိုးလို့သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ မုဒိန်းကျင့်တဲ့ဆာဘ်တွေက အကျင့်ခံရသူတွေကို ဘော့စ်နီးယန်းသွေးနှောတွေလို့ သတ်မှတ်ခြင်း ဘယ်ဟာကိုအတည်ယူပြီး အမှု တွဲတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ စကားပြောလာပါတယ်။
ကျူးလွန်သူဘက်က ကျူးလွန်ချိန်အတွင်း သတ်မှတ်ခြင်းကိုပဲ အတည် ယူပြီး အမှုတွဲတည်ဆောက်ပါတယ်။ ရဝမ်ဒါဂျင်နိုဆိုဒ်မှာတော့ ဒီအချက်က ပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ ကျူးလွန်သူ ဟူတူလူမျိုးနဲ့ အကျူးလွန်ခံရသူ တွတ်ဆီလူမျိုးတွေဟာ တကယ် တော့ သွေးတူ၊ စကားတူ၊ ဘာသာတူ အားလုံးအတူတူပဲ။ ကိုလိုနီအရှင် သခင်တွေလက်ထက်တုန်းက အရပ်ပိုရှည်တဲ့ နှာခေါင်းပိုချွန်တဲ့သူတွေကို ရွေးထုတ်ပြီး ကိုလိုနီအစိုးရယန္တယားမှာအသုံးချရင်း အဲဒီသူတွေဟာ တွတ်ဆီရယ် လို့ ဖြစ်လာတယ်။
ကျန်တဲ့သူတွေက ကိုလိုနီခေတ် ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုတွေနဲ့ ရုန်းကန်ရချိန်မှာ နာကြည်းချက်တွေ ဝင်လာတယ်။ သူတို့က ဟူတူတွေပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှာတော့ အနှိမ်ခံဟူတူတွေလက်ထဲ အာဏာရလာပြီး ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ် ပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးတော့ Genocide နဲ့ အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။ ဟူတူနဲ့တွတ်ဆီ အပြန်အလှန်လက်ထပ်တာတွေလည်း အများကြီး။ ဥပမာ-အဖေကတွတ်ဆီ၊ အမေက ဟူတူ၊ မိသားစုမှာရော နှစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဘာပြသနာမှမရှိ။ ဒါပေမဲ့ ဟူတူပြည်သူ့စစ်တွေက တစ်မိသားစုလုံးကို သတ်ဖြတ် သွားခဲ့တယ်။ ခုံရုံးရောက်မှ တရားခံက ဘာထွက်ဆိုချက်ပေးလဲဆိုတော့ “ဟူတူ ဟူတူချင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်လုပ်စရာလားဗျာ” တဲ့။ ဒီမှာတင် ကျူးလွန်သူက ကျူးလွန်ချိန်အတွင်း သတ်မှတ်မှုကိုပဲ အတည်ယူတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဒီမိသားစုကို တွတ်ဆီအဖြစ်ယူဆခဲ့လို့ သတ်ဖြတ်တာမို့ Genocide မြောက်တယ်။ ဒါရဝမ်ဒါ ခုံရုံးရဲ့ စီရင်ချက်တွေ။
ဒါဆို လူမျိုးတူသူအချင်းချင်း ကျူးလွန်ရင် Genocide မမြောက်ဘူး လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းထွက်လာတယ်။
မြန်မာပြည်မှာရော ဘော့စ်နီးယားလို ရဝမ်ဒါလို သွေးနီးတဲ့လူမျိုးတွေ ဂျင်နိုဆိုဒ်ဖြစ်နေသလားပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကျူးလွန်မှုကို မြန်မာအစိုးရက communal violence လို့နာမည်တပ်ပေမယ့် ကမ္ဘာက Genocide အဖြစ်ပဲသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ။ ပြည်မက မိတ္ထီလာနဲ့ နောက်ပိုင်းဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း မြန်မာအစိုးရ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြားပဋိပက္ခ (communal violence) လို့ နာမည်တပ်ပါတယ်။
communal violence လား? Genocide လား? ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ် ဖို့ သတ်မှတ်ရာမှာ ပြောစရာတချို့ ရှိလာနိုင်တာကို ဒီ status က မီးမောင်း ထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မထဲကမွစ်ဆလင်မ်တွေဆိုတာ အနည်းနဲ့အများ ဗမာသွေးပါကြသူချည့်ပါပဲ။ တချို့ မိသားစုတွေမှာ ဖခင်ကမွစ်ဆလင်မ် မိခင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး သားသမီးအရင်းအချာတွေထဲမှာလည်း အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်သူရော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူပါ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်မက မွစ်ဆလင်မ်တွေလည်း ဘာသာရေးအရပစ်မှတ်ထားခံရတာမို့ Genocide Convention အရအကာအကွယ်ပေး ထားသောအုပ်စုထဲမှာတော့ ပါပါတယ်။
ဒီအချိန်ကျမှ ရုတ်တရက် ထဂေါက်ပြီး “ကျုပ်တို့က မြန်မာလူမျိုး အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်သူတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ကျုပ်တို့မြန်မာမွစ်ဆလင်မ်တွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး” လို့ထအော်တဲ့ ဖျက်မြင်းတွေဟာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အော်တာလဲ? Genocide Convention အရ အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ scope ကို ကျဉ်းအောင် ဝင်ကစားချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လားလို့ ဆန်းစစ်ရတော့မှာပါ။ တစ်ခုတော့ မှတ်ထားပါ။ အဲဒီ ဖျက်မြင်းတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝအောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့မှာရေးမယ့် auto – genocide အကြောင်းမှာ စောင့်ဖတ်ကြပါ။
ကျူးလွန်သူနဲ့ ကျူးလွန်ခံရသူဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်နှစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနိုင်မှ အမှုတွဲတည်ဆောက်လို့ရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိလာတာက ကျူးလွန်သူနဲ့ ကျူးလွန်ခံရသူက လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေရင်ရော? ဥပမာ-ကမ္ဘောဒီးယားက ခမာနီတွေလုပ်ခဲ့သလို လူ နှစ်သန်းလောက် ကို သတ်ဖြတ်ပစ်တာမျိုး။ ကျူးလွန်တဲ့ ခမာနီတွေနဲ့ အကျူးလွန်ခံရတဲ့ ကမ်ပူးချား ပြည်သူတွေဟာ လူမျိုးအတူတူပဲ။
နိုင်ငံရေးခံယူချက်အရ မတူလို့ကျူးလွန်တယ် ပြောကြသေးတယ်။ ဒါကို politically or idealogically motivated genocide လို့ နာမည်တပ်ကြသေးတယ်။ တကယ်တော့ ကမ်ပူးချားပြည်သူတွေဟာ ခမာနီတွေကို ဆန့်ကျင်ပြနေတာလည်း မဟုတ်။ ဒါဟာ လူမျိုးတူသူ အချင်းချင်း ကျူးလွန်တဲ့ genocide=autogenocide အစပိုင်းမှာ autogenocide ကို Legal Genocide အဖြစ်သတ်မှတ် ဖို့ကိစ္စကို အငြင်းပွားကြသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာ autogenocide ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားလို့ပဲ။ ဒီဟာကို အရေးအရာ လုပ်ပြီး ထည့်ပြောနေရတာက တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ “ကျွန်တော်တို့ဟာ စစ်ဖြစ်နေသော်လည်း တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျူးလွန်မှုတွေ ဟာ Genocide မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ကြိုကာထားတာတွေရှိတယ်။
တိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီအကိုတွေမို့ ကျူးလွန်မိသမျှဟာ အချင်းချင်းလုပ်မိတဲ့ autogenocide သာဖြစ်တယ်။ Legal Genocide အဖြစ် တည်ဆောက် မရအောင် ကြိုကာထားတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကာကွယ်မှုဟာ အခုခေတ်မှာ ဒိတ် အောက်သွားပြီ။ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ autogenocide ဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာ တရားဝင်သုံးနှုန်းဖော်ပြ ထားတာမရှိပေမယ့် ကမ်ပူးချားခုံရုံးရဲ့ စီရင်ထုံးတွေမှာတော့ autogenocide သည် legal genocide မြောက်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးသား။ ကမ်ပူးချားခုံရုံးရဲ့ စီရင်ထုံးတွေကို ထောက်ရှုပြီး autogenocide သည် legal genocide ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကလည်း ထပ်ဆင့်အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။
marginalization=သေးသိမ်အောင်ဘေးသို့တွန်းပို့ခြင်း (သို့) တန်းညှိခြင်း
ဒါက Genocide ကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ငြင်းဆန်တာ။ Genocide ကို Genocide လို့အသိအမှတ်မပြုဘဲ လူတွေရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာရတဲ့ကိစ္စတို့၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခြင်းတို့ စသဖြင့် တခြားနာမည်တပ်တာ။ မြင်အောင်ပြောရရင် Diagnosis အလွဲတပ်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလွဲတာ ဟာ မတော်တဆလွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သေချာရည်ရွည်ချက်ရှိရှိလွဲအောင် လုပ်တာ။ လုပ်တာမှ Genocide ကိုကျူးလွန်စဉ်ကာလကတည်းက အဲလိုလမ်းလွှဲ လို့ရအောင် လုပ်ယူထားတာ။
ဥပမာ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်က သတ်ဖြတ်မှုမှာ တိုက်ရိုက်ဝင်မပါဘဲ ဒေသခံတွေကို လူအုပ်စုဖွဲ့ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ပေးပြီး သတ်ဖြတ်ဖို့လွှတ်ပေးထားလိုက်တာ။ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲကတော့ နိုင်ငံတကာမှာလှည့်လည်ပြီး တော့ ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့အားထုတ်နေကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြဿနာ ဖြစ်ကြာင်း တော်ကီပစ်ချင်ပစ်နေမယ်။ ဒါတွေက ဘော့စ်နီးယားမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဆားဘီးယားအမြဲတမ်း တပ်မတော်ဟာ တိုက်ရိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေမှာ ဘယ်တော့မှဝင်မပါဘူး။ ဆာဘ် ပြည်သူ့စစ်တွေကပဲ တိုက်ရိုက်သတ်ဖြတ်၊ မုဒိန်းကျင့်တယ်။ မီလိုဆီဗစ်က ပြည်တွင်းစစ်လို့ အင်တာဗျူးတွေ ဖြေမယ်။
ဒါက ဖြစ်စဉ်ကို ကျူးလွန်စဉ်ကတည်းက အကွက်ချပြီး marginalize လုပ်နေတာ။ ခံရတဲ့သူတွေဘက်က ထွက်ပြေးပြီး ဖြစ်စဉ်ပြီးသလောက်ရှိချိန်မှာ တော့ “ဒုက္ခသည်ပြဿနာ” တို့ “ပြန်လည်နေရာချထားရေးပြသနာ” တို့စသဖြင့် တူနိုးနိုး အသုံးအနှုန်းတွေသုံးပြီး Genocide ကို သေးသိမ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်လို့ ငလျင်လုပ်လို့ ဒုက္ခသည်ဖြစ်လာတာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ မြင်အောင်ပြောရရင်…
– လူတစ်ယောက် တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေတယ်။
– နောက်လူတစ်ယောက်ကားတိုက်ခံရလို့ သေတယ်။
– နောက်လူတစ်ယောက် အရက်အတူသောက်ရင်း ရန်ဖြစ်ပြီးဒေါသစိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ဓါးနဲ့ထိုးမိပြီးသေတယ်။
– နောက်တယောက်က ဖမ်းဆီးခံရပြီး လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ညှဉ်းဆဲခံရလို့ သေတယ်။
ဖြစ်စဉ်အားလုံးမှာ ရလဒ်က လူတစ်ယောက်သေဆုံး သွားတယ်ဆိုတာ ချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဖြစ်စဉ်တွေကို စီရင်ရာမှာ လူတစ်ယောက်သေတာပဲကွာလို့ တန်းညှိပြီး အားလုံး ပုဒ်မတစ်ခုတည်းနဲ့ စီရင်လို့ မရဘူးလေ။ လူသေမှုပုဒ်မ၊ လူသတ်မှုပုဒ်မ၊ အညိုးအတေးနဲ့ လက်စားချေ သတ်ဖြတ်ရင် လူသတ်မှုပုဒ်မနဲ့စွဲတောင် ပြစ်ဒဏ်ကပိုပြင်းထန်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် Genocide ကို အပျော့စားပုံစံနဲ့ ငြင်းဆန်တဲ့ marginalisation ဟာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကတော့ marginalization ကို လုပ်နေကြတုန်းပါပဲ။
ဒီနေ့ပို့စ်ကတော့ ကျူးလွန်သူနဲ့ ကျူးလွန်ခံရသူကြားကစည်းကို ဘယ်လိုပိုင်းခြားလဲဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြတာပါ။ လူမျိုးတူသူအချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ် သွေးသားနီးစပ်သူ အချင်းချင်းကျူးလွန်တဲ့ autogenocide ဟာ ဥပဒေကြောင်း အရ genocide မြောက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရော အဲဒါမျိုးဖြစ်သလား? တိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီအစ်ကိုဆိုပြီး နှစ် ၆၀ လောက် သတ်ချင်သလို သတ်ဖို့ ဂျင်းထည့်ထားတာဟာ ဗမာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ ကြို တင်
ဂျင်နိုဆိုဒ်အင်ပါယာအတွက် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လျှော့မတွက် ပါနဲ့။ ဥပဒေကို ကလိမ်ကကျစ်အသုံးချရာမှာ အင်မတန်မှ ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။
ဗမာအာဏာပိုင်တွေဟာ ပြည်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြည်တွင်းစစ်လို့ မသုံးနှုန်းပါဘူး။ သောင်းကျန်းမှုနှိမ်နင်းသည့်စစ်ဆင်ရေး အဖြစ်ပဲသုံးနှုန်းပါတယ်။ ဘာကွာသလဲဆိုတော့ ပြည်တွင်းစစ်လို့သတ်မှတ်ရင် ဂျီနီဗာ
ကွန်ဗန်းရှင်းရဲ့သက်ရောက်မှုက ပိုအားကောင်းပါတယ်။ သောင်းကျန်းမှုနှိမ်နင်း ရေးဆိုရင် မြန်မာပြည်တွင်းဥပဒေက သက်ရောက်မှုပိုအားကောင်းပါတယ်။
မြန်မာလို “တိုင်းရင်းသား”ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ နိုင်ငံတကာတန်းမဝင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းပါ။ ချိတ်ဆက်ကျကျပြန်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ ကိုယ့် ဥပဒေနဲ့ကိုယ် လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရအောင် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဂွင်ဆင်ထား တာပါ။ ဒါက ဥပဒေကြောင်းအရချည်းကပ်တာပါ။ ဖြစ်စဉ်ကြောင်းအရချည်းကပ်ရင် မြန်မာအစိုးရဟာ သူတို့လက်နဲ့သူတို့ တိုက်ရိုက်သတ်ဖြတ်တာရှိသလို လူနည်းစုအချင်းချင်းပြန်သတ်ခိုင်းတာလည်းရှိ ပါတယ်။ ဥပမာကတော့ ကရင်အချင်းချင်းပြန်သတ်ခိုင်းတာပါ/ autogenocide ရဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲ။
ဘာသာရေးဗန်းပြ ကရင်ခွဲထွက်အဖွဲ့ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့ ကရင်ခရစ်ယာန်နဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေအသတ်ခံရပြီး သံလွင်မြစ်ထဲအမြောခံရတာ မြစ်ရေတောင် ပုပ်သွားသတဲ့။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ? collaborators=ပုဆိန်ရိုးလုပ်ပြီး အချင်းချင်းပြန်သတ်သူတွေလား? နောက်ကွယ်ကစေခိုင်းသူတွေလား?
ကျူးလွန်သူကို သတ်မှတ်ရာမှာ တိုက်ရိုက်သတ်ဖြတ်သူရော နောက် ကွယ်က အစီအမံချပေးသူပါ ပါတယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပြီးသားပါ။
နောက်တစ်ခုက Genocide ကို တခြားသောဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး သေးသိမ်အောင် diagnosis အမှန်မထွက်အောင်လုပ်တာပါ။ ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ အဘ တွေက စာမတတ်တော့ အစ်မကြီးကို ရှေ့ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ Genocide ကျူးလွန်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကို လည်ပတ်နေတဲ့ အနေအထားပါ။
၃။ intention = ကျူးလွန်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်
ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့ “မနုဿလူသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုသော ရည်ရွယ် ချက်” ဘိုလိုဆိုရင်တော့ an intention to destroy suchagroup in whole or in part ပါ။ မဏ္ဍိုင် ၄ ခုမှာ ဒီ ရည်ရွယ်ချက်ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ရတာ အခက်ခဲဆုံးပါ။ ရဝမ်ဒါခုံရုံးက တရားသူကြီးတွေကတော့ တချို့အမှုတွေမှာ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကို ဆန်းစစ်ဖို့ဟာ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကို ခက်ခဲလွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတော့ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကို ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော “ရာဇဝတ်မှုများရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးသက်ရောက် စေမှုများ” နဲ့ “ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ” ကို ဆက်စပ်ယူကြည့်ရလို့ပါ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုဟာ အဖြစ်အပျက်ပေါင်းစုံ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ပြင်းအားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုအစုအထွေးကြီးပါ။ တစ်ခုချင်းကို ခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးဇယားဆွဲရတာ၊ သက်သေအထောက်အထားရှာရတာကိုက အတော်လက်ဝင်တဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါတွေဟာ ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးသက်ရောက်မှုကို ဆန်းစစ်ရတဲ့အပိုင်းပါ။
ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို ဆန်းစစ်ဖို့ကတော့ လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာ ကျူးလွန်တုန်းအချိန်မှာသာ သတ်ပစ်၊ လုပ်ပစ်၊ မီးရှို့ပစ် စသဖြင့် စိတ်အားတွေ ကြွတက်ပြသလောက် တရားရုံးရောက်ပြီး အရေးယူခံရမှာသေချာပြီဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှ ခေါင်းရှောင်ဖို့ပဲ လုပ်ပါတော့တယ်။
ရာဇဝတ်ကောင်အချင်းချင်း လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံချမယ်။ အမိန့်အရလုပ်ရတာလို့ ရှောင်ထွက်မယ်။ အခြေအနေအရဖြစ်သွားတာပါ၊ ရင်ထဲမှာ ဘာမှ မရှိပါဘူးလို့ မျက်နှာပြောင်တိုက်မယ်။ ဘယ်ရာဇဝတ်ကောင်ကမှ “ဟုတ်တယ် အဲဒီလူမျိုးတွေကို မုန်းလွန်းလို့ အပြီးသတ်သုတ်သင်ပစ်ချင်လို့ လူသတ်တယ်၊ မီးရှို့တယ်၊ မုဒိန်းကျင့်တယ်ကွာ” လို့ ဝန်မခံရဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်တာဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလားလို့ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို ဆန်းစစ်တာဟာ အတော်ကိုခက်ခဲပါတယ်။
ဒါဆို ရာဇဝတ်ကောင်တွေဘက်က မဝန်ခံမချင်း ရည်ရွယ်ချက် ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့? အဲလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ! တရားရုံးအနေနဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေ အင်ထားသရွေ့ ဘာမှလုပ်မရတာမျိုး ဘယ်အဖြစ်ခံမလဲ။ဥပမာ-ဦးကိုနီကို သေစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးလို့ ကြည်လင်းပြောသမျှ လက်ခံစရာလား။ အဲဒီသဘောပေါ့ဗျ။ ရာဇဝတ်ကောင်ရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါဆို ရည်ရွယ်ချက်ရှိ၊ မရှိကို ဘာနဲ့ထောက်ပြီး ဆန်းစစ်လဲဆိုတော့ အမှုရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင်းပေါ့ဗျာ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြောင်းဟာ Ten stages of Genocide လေဗျာ။
Genocide Watch အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဌ Dr.Gregory Stanton ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု State Department မှာ Eight Stages of Genocide ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းထပ်တိုးဖြည့်စွက်ချက်တွေနဲ့ Ten Stages
of Genocide ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။
( ၁ ) အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း = classification
“တို့အားလုံး” ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမရှိတော့ဘဲ “မင်းတို့ကသပ်သပ် ငါတို့ကသပ်သပ်” ဆိုတဲ့ ခွဲခြားခြင်းပါ။ ဒါဟာ လူသားတွေမှာ အမြဲတမ်းမဟုတ်တောင် တခါတရံဖြစ်လေ့ရှိတဲ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့သဘာဝ မဟုတ်ဘူးဗျ။ မကောင်းတဲ့သဘာဝမို့ ကြီးထွားကျယ်ပြန့်မလာအောင် ထိန်းချုပ် ရတယ်။ အဲလိုမထိန်းချုပ်ဘဲ ကြီးထွားသည်ထက်ကြီးထွားအောင်လုပ်လာပြီဆို ရင်တော့ သတိထားတော့ဗျို့။
( ၂ ) တံဆိပ်ကပ်ခြင်း = Symbolization
တချို့က အမှတ်အသားလုပ်ခြင်းလို့ ပြောတယ်။ ဥပမာ-ဂျူးဆိုရင် သံပုရာခွံဦးထုပ်ဆောင်းထားမယ်။ မွစ်ဆလင်မ်ဆိုရင် မုတ်ဆိတ်ထားတတ်တယ်။ ဒါက ကိုယ့်ဖာသာ အမှတ်အသားလုပ်တာ။ ဒါလည်း လူတွေ သာမန်အချိ်န်မှာ လုပ်နေကျကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဟာ အဲဒီလိုကိုယ့်ဖာသာလုပ်တာထက်ပြင်း ထန်တယ်။ ဥပမာ-ဂျူးဆိုရင် အဝါရောင်ခြောက်ထောင့်ကြယ်တံဆိပ်ကပ်ကိုကပ် ထားရမယ်လို့ နာဇီတွေက အမိန့်ထုတ်တာ။ ဒါက ဂျူးတွေကိုယ့်ဖာသာသံပုရာခွံ ဦးထုပ်ဆောင်းတာထက် ပိုတဲ့ကိစ္စဗျ။ အင်အားသုံးပြီး တံဆိပ်ကပ်ခံရတာအနေ အထားရောက်သွားပြီမို့ သတိထားတော့ဗျို့။
( ၃ ) ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း = Discrimination
ဒါတော့ လုံးဝရှင်းသွားပြီ! မင်းတို့ကသပ်သပ် ငါတို့ကသပ်သပ်မို့ မင်းတို့ကို ငါတို့လို အခွင့်အရေးမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်။ ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွေမှာ ပါဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ ဒီအဆင့်က ပုံမှန်လူ့သဘာဝ မဟုတ်တော့ဘူး။ သေချာကို ရုံးအမိန့်၊ ညွှန်ကြားလွှာ၊ လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားချက်၊ နှုတ်မိန့်စသဖြင့် အာဏာကိုစွဲကိုင်ပြီးကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အဆင့်။
( ၄ ) လူအဖြစ်ရှုမြင်သတ်မှတ်မဆက်ဆံတော့ခြင်း = Dehumanization
အရေးပါတဲ့ နေရာအဆင့်တွေကနေ ဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ လူမျိုးစုဟာ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းထွက်လာတာတောင် လူအဖြစ် အမြင်မခံတော့ဘူး။ ကပ်ပါးတွေ၊ နိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တွေ၊ သစ္စာမရှိသူတွေ စသဖြင့် ရှုမြင်ခံရပြီ။ လူကိုလူလို့မမြင်နိုင်တော့ဘဲ တဆင့်နိမ့်အဖြစ်ရှုမြင်ခံရပြီ။ ဒီအဆင့်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာက ပြင်းထန်တဲ့ ဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေပဲ။ “သွေအေးလို့မနေသင့်တော့ပြီ” တို့ “နိုင်ငံတော်အတွက်၊ အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ဒီအဆင့်မှာ ဖောဖောသီသီ ကြားရပြီ။
အမုန်းတရားဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကို လွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုထုတ်ဝေခွင့်အရလုပ်တာလို့အကြောင်းပြတတ်ကြတယ်။ သိထားဖို့ကအမုန်းတရားဖြန့်ဝေမှု အတွက် လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခွင့် မရှိဘူးဆိုတာပဲ။
Genocide မြောက်, မမြောက် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်
( ၅ ) စုဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်း = Organization
အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ ပြင်တာပါပဲ။ လူသတ်ဖို့ ပြည်သူ့စစ်တွေဖွဲ့မယ်၊ လက်နက်တပ်ဆင်မယ်၊ လေ့ကျင့်ပေးမယ်။ သွေးထိုးပေး ထားတဲ့ လူဆိုးလူသွမ်းတွေကိုခေါ်ပြီး အုပ်စုလိုက်သိုင်းသင်ပေးတာကစလို့မောင်းပြန်သေနတ်လို လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးပြီး သုတ်သင်ရေးအဖွဲ့တွေ တည်ဆောက်တာအထိပါဝင်ပါတယ်။
( ၆ ) ထောင့်စွန်းတဖက်သို့ တွန်းပို့ဂျောင်ပိတ်ခြင်း = Polarization
ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့လူမျိုးစုကို (နိုင်ငံတော်အဆင့်ကတရားဝင်) ချေမှုန်း ဖို့လုပ်နေပြီလို့ လူတိုင်းသိလာအောင်လုပ်တာ။ အဆင့် (၃) မှာပါတဲ့ Discrimination လုပ်တာတွေကို တရားဝင်လူသိရှင်ကြားအရှိန်မြှင့်ကျင့်သုံးတာတွေပါမယ်။ ဥပမာ-အရင်က မှတ်ပုံတင်သွားလုပ်ရင် ရုံးမှာပဲသွေးနှောဆိုပြီးခွဲခြားမယ်။ ဒါက လူမသိသူမသိ Discrimination ။ Polarization အဆင့်ကျတော့ လူထုထဲမှာကိုတရားဝင်လုပ်ပြတာ။ ဥပမာ-အခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကလေးအရွယ်ကျောင်းသားလေးတွေ ကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးရာမှာ ဘာသာမတူတဲ့ လူနည်းစုကလေးတွေကို သွေးနှော မို့လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ဒဲ့ခွဲခြားတာ။ တရားဝင် လူသိရှင်ကြားခွဲခြားလိုက်တာ။
ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ လူမျိုးစုဟာ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး၊ လွှတ်တော် စတာ တွေကနေ ဖယ်ရှားခံရပြီးသားဖြစ်တာမို့ ဘာမှ ပြန်လှန်ပြောဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင် အဲဒီလူမျိုးတွေနဲ့ လက်မထပ်နဲ့ မပတ်သတ်နဲ့ စသဖြင့် ကန့်သတ်မှုတွေကို တရားဝင်ဥပဒေပြဌာန်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်တာ။ အဲဒီလူမျိုးတွေရဲ့ ဆိုင်မှာမဝယ်နဲ့၊ မြေမရောင်းနဲ့၊ အိမ်မငှားနဲ့ စတဲ့ ဒေသန္တရအမိန့်တွေ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီး ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ လူမျိုးစုကို ထောင့်ကပ်သွားအောင် အားငယ်သွားအောင် ဦးချိုးထားလိုက်တာပါ။
( ၇ ) ပြင်ဆင်ခြင်း = Preparation
ဒီအဆင့်ကကျ ရှင်းတယ်။ ရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းအတွင်းမှာကို သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာ။ ပစ်မှတ် ထားခံရတဲ့လူမျိုးစုကို အစာရေစာရှားပါးတဲ့နေရာတွေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကို တွန်းပို့ထားလိုက်တာ။ ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တာ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားအင်ပါ ချည့်နဲ့အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်။
( ၈ ) ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း = Persecution
ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့လူမျိုးစုကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာ ပိတ်ဆို့ ထားလိုက်ပြီး ငတ်ပြတ်အောင် ရောဂါဘယတိုးပွားအောင် ချည့်နဲ့နေအောင် လုပ်ပြီးပစ်ထားလိုက်တာ။ ဥပမာ-ဂျူးတွေကို နာဇီတွေက ဂတ်တိုတွေထဲမှာပိတ်လှောင်ညှဉ်းဆဲ ထားသလိုမျိုး။ ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့လူမျိုးစုဟာ ခြင်းထဲက ကြက်တွေလိုဖြစ်သွား ပြီးလိုအပ်ရင် တစ်ကောင်ချင်းကနေ လေးငါးကောင်အုပ်စုလိုက် စတင်အသတ်ခံရပြီ။
( ၉ ) အစုလိုက်အပြုံလိုက်သုတ်သင်သတ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း = Extermination
ဒီအပိုင်းကတော့ ဂျင်နိုဆိုဒ်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် လူတွေအသိအများ ဆုံးအပိုင်းပါ။ နာဇီတွေက ဂျူးတွေကို အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ခန်းထဲထည့်ပြီး သန်းချီ သတ်ပစ်တာမျိုးပါ။ ရဝမ်ဒါမှာတော့ တစ်ရပ်ကွက်ပြီးတစ်ရပ်ကွက် မီးရှို့ ဓါးနဲ့လိုက်ခုတ် ထစ်ပြီးသတ်တာပါ။ ဆရက်ဘရက်နီဆာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ တူ လာတိုလီအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု ဒါတွေက Extermination အဆင့်ပါ။
( ၁၀ ) ငြင်းဆန်ခြင်း = Denial
လူသတ်ပြီး အလောင်းတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မြေကျင်းထဲထည့်မြုပ်ပြီး သက်သေအထောက်အထားတွေကိုဖျောက်မယ်။ လိုအပ်ရင် ကိုယ့်လက် အောက်က သူတွေကိုထိုးကျွေးမယ်၊ နှုတ်ပိတ်ပစ်မယ်။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပွားရာနယ်မြေတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ တွေဝင်ခွင့်မပေးဘူး။ ဒါက ငြင်းဆန်တဲ့အဆင့်ရဲ့ အဓိကပုံစံတွေ။ ဒီလိုပုံစံတွေနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဝင်ပြီး ငြင်းဆန်နေတာကိုက ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသက်သေတွေပဲ။ ဒီအဆင့် ၁၀ ဆင့်ဟာ ၁ ၂ ၃ ၄ စသဖြင့် အစဉ်လိုက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်။ ၁ ပီး ၂ လာ၊ ၂ ပီး ၃ လာ အဲလိုမျိုးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။
၁ ဖြစ်တယ်။ ၁ ဆက်ဖြစ်နေရင်းနဲ့ ၂ ကထပ်ဖြစ်လာမယ်။ ၃ ကထပ်ဖြစ်လာမယ်။ တစ်ခါတရံ တစ်နိုင်ငံတည်းမှာကို ဒေသတချို့မှာ အဆင့် ၅ အထိဖြစ်နေပြီး တချို့ဒေသမှာ အဆင့် ၈ အဆင့် ၉ ဖြစ်နေမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Genocide ဆိုတဲ့ Diagnosis တပ်ပြီးရင် Prognosis အရ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာပါ သိထားမှ ဒီရာဇဝတ်မှုကို ဘယ်လိုစီရင် ကိုင်တွယ်သလဲဆိုတာ နားလည်လိမ့်မယ်။
ကဲ intention ရှိ၊ မရှိကို ရာဇဝတ်မှုရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင်းအရ 10 stages နဲ့ချိန်ညှိပြီး စဉ်းစားလို့ရတယ်။ လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို စနစ်တကျ ပစ်မှတ်ထားပြီးအဆင့်ဆင့် နှိပ်ကွပ်ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကြီးကို ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲ မတော်တဆ လုပ်မိတာပါလို့ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ ဒီမှာတင် ရာဇဝတ်ကောင်တွေဘက်က ဘယ်လိုထပ်ပြီးငြင်းချက်ထုတ်သလဲကြည့်ရအောင်။
သူတို့ဟာ ဒီလိုညှဉ်းဆဲမှု၊ နှိပ်ကွပ်မှုရဲ့ ဆက်လက်သက်ရောက်မယ့် ဆိုးကျိုးကိုမသိပါဘူး။ အထက်ကအမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရပ် တွေဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ကြောင်း လုံလောက်တဲ့အသိ သူတို့မှာမရှိလို့ပါလို့ အကြောင်းပြတတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ-ကလေးအရွယ် ကျောင်းသားလေးတွေကို သွေးနှောမို့မှတ်ပုံတင် လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ လူအများရှေ့မှာနှိပ်ကွပ်ခြင်းဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရဲ့ အဆင့် (၆) ဖြစ်တဲ့ polarization ကိုကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ အလတ်တန်းအစိုးရအရာရှိတယောက်က တရားရုံးမှာထွက်ဆိုချက်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအရာရှိကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသင့်သလား?
ဥပဒေကိုမသိလို့ ချိုးဖောက်မိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ ဘောင်ဝင်သလား? နှစ်ခါပြန်မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အရှင်းဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်။ အရူးကွက်နင်းခွင့်မရှိပါဘူး။ မရူးလို့ စာဖတ်တတ်လို့ အရာရှိဖြစ်တာပါ။ လုံးဝ ကင်းလွတ်ခွင့်မရပါဘူး။ အဆင့်အတန်းအလိုက် တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို အဆင့်အတန်းအလိုက်အရေးယူရပါတယ်။ နောက်တခါထပ်ပြီး အတွန့်တက်လာနိုင်တာက ဘာလဲဆိုတော့ “အဲဒီ လူမျိုးစုကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ အခုလည်း အဲဒီလူမျိုးတွေ အကုန်လုံးသေသွားတာမှမဟုတ်တာ” လို့ ပြောတဲ့စကားပါ။
ဒီအတွက် ရဝမ်ဒါခုံရုံးရဲ့စီရင်ချက်တစ်ခုမှာပါတာကတော့ A failure to destroyagroup does not mean genocide did not occur = လူ့အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ကို မဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တာမို့ ဂျင်နိုဆိုဒ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ မဆိုလိုချေတဲ့ဗျာ။
မွစ်ဆလင်မ်ကင်းစင်လွှတ်တော် မွစ်ဆလင်မ်ကင်းစင် အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဘယ်သူတွေက ဘာလုပ်လဲသိကြပေါ့ဗျာ။ မွေမွေ့ကို ယုံတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြောင့် ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး သဲကြမ်းထည့်ပွတ်ခံရတဲ့ဘဝရောက်ရတာကို မြင်သင့်ပါပြီ။
Genocide မြောက်, မမြောက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်
စာလိုပေလိုဆိုရင်တော့ Acts amounting to genocide = ဂျင်နိုဆိုဒ် မြောက်စေလုပ်ရပ်များ။ ဒါဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြလို့အရဆုံး မဏ္ဍိုင်ပဲ။ ဘာတွေပါဝင်လဲ ဆိုတော့….
– အင်အားသုံး၍ ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း
– ကျောင်းတက်ခွင့် ဆေးကုခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်း
– ပေါ်တာ မိုင်းနင်းလုပ်ခိုင်းခြင်း
– ပစ္စည်းဥစ္စာများကို လုယူခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊
– အတင်းအဓ္ဓမ အင်အားသုံးရွှေ့ပြောင်းစေခြင်း
စသဖြင် စသဖြင့် အစုံအစုံ ပေါ့ဗျာ။
magnitude ပမာဏကျ ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ ? ဥပမာ-လူသတ်ရာမှာ လူတစ်ရာကိုသတ်မှ genocide လား။ ၁၀၀၀ ကိုသတ်မှ genocide လား စသဖြင့်မေးတာတွေရှိတယ်။ အဲလို သတ်မှတ်လို့တော့ မရဘူးလေဗျာ။ တော်ကြာ ရာဇဝတ်ကောင်တွေဘက်က ၉၉၉ ယောက်ပဲသတ် တာတို့ ၁၀၀၀ မကျော်ဘူးတို့လုပ်လာနိုင်တယ်။
ပမာဏကို ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ လုပ်ရပ်များသည် စနစ်တကျဖြစ်နေသလားဆိုတာနဲ့ တိုင်းတယ်။ systematic and methodical ဖြစ်သလားဆိုတာကြည့်တာ။ အဲလိုဟုတ်၊ မဟုတ်ကြည့်ဖို့က လွယ်တယ်လေ။ ကြားဖြတ်ကြေးနန်း ဖမ်းယူမှု၊ ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာ၊ မှုခင်း ဆေးပညာစစ်ဆေးမှုများ စသဖြင့်စီစစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ လောက်က ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံ ဆရက်ဘရက်နီဆာမှာဆာဘ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လူ ၈၀၀၀ ကျော်ကိုသတ်ဖြတ်ပြီး မြေကျင်းကြီးတွေထဲမှာ မြုပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ မြေကျင်းတူးတဲ့ ဘူဒိုဇာကားကိုသာမက အဲဒီကားတွေရဲ့ ဘီးရာ တွေကိုတောင် ဂြိုဟ်တုကနေ ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ က နည်းပညာ။ ဒီဘက်ခေတ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၊ လူတိုင်းလက်ထဲကဖုန်း၊ အင်တာ နက်တွေကြောင့် ဖုံးကွယ်ပြီးကျူးလွန်ဖို့ဆိုတာ ပိုတောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကိုစီရင်ရာမှာ ဘယ်လိုမူဝါဒ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့စီရင်ရသလဲ။ ဒီနေရာမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လိုတည်ထောင်ထားသလဲဆိုတာကို တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်။ လူတစ်ယောက်ချင်း>>မိသားစု>>အသိုင်းအဝိုင်း>>လူမျိုး>>လူမျိုး များနဲ့ စုပေါင်းထားသော ပြည်သူပြည်သား ဒီလိုအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ထားတာ။
တိုင်းပြည်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာမှာ ဒေါက်တိုင် ၃ ခု ပါတယ်။
၃။ စီမံခန့်ခွဲခွင့် (သို့) အချုပ်အခြာအာဏာ
အချုပ်အခြာအာဏာဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေဆီကနေ သက်ဆင်းရတယ်။ ဒီတော့ လူမျိုးတစ်မျိုးမှာပါဝင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီကို ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်တဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုသည် ပြည်သူပြည်သားထက်တောင် အခြေခံကျတဲ့အဆင့်တွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။
ဒီလိုအခြေခံကျတဲ့ အဆင့်တွေကိုဖျက်ဆီးရာမှာ အချုပ်အခြာအာဏာ ဆိုတဲ့အရာကိုစွဲကိုင်ပြီး လုပ်လေ့ရှိတယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာကို စွဲကိုင်ပြီး အချုပ် အခြာအာဏာထက်ပိုမိုအခြေခံကျတဲ့ လူမျိုးဆိုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖျက်ဆီး
တာဖြစ်တဲ့အတွက် မြင်အောင်ပြောရရင် သစ်ပင်အကိုင်းပေါ်ခွထိုင်ရင်း အကိုင်းကိုထောက်မထားတဲ့ ပင်စည်ကို ခုတ်ဖြတ်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံတခုမှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နေတာကို သိပါလျက်နဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေက “သူတို့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ သူတို့လုပ်တာပဲ” ဆိုပြီး လွှတ် ထားလို့မရဘူး။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရမယ်။ ကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကို ထိရောက်သောပုံစံသုံးပြီး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ နိုင်ငံတကာဥပဒေရှိထားတယ်။
အချုပ်အခြာအာဏာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူး။ အချုပ်အခြာအာဏာသည် အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ ယူဆခွင့်မရှိဘူး။ အချုပ်အခြာအာဏာထက်ပိုမိုအခြေခံကျသော လူသားအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်။ လွယ်လွယ်လေးမြင်အောင်ပြောရရင်တော့ လူရှိမှ တိုင်းပြည်တွေ အစိုးရတွေ ရှိလာတာလေ။ ဒါကိုလက်မခံဘဲ လူတွေကို လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလေဗျာ။
ဒီမှာတင် Genocide ကိုစီရင်တဲ့ဥပဒေတွေဟာ သာမန်နိုင်ငံ တကာဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ မူဝါဒစည်းမျဉ်းတွေကို ကျော်လွှားခွင့်ရှိလာတယ်။ သာမန်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေဟာ နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားက အချုပ်အခြာအာဏာကို အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာ။ Genocide ဥပဒေတွေက အချုပ်အခြာအာဏာထက်ပိုမိုအခြေခံကျ သော မနုသလူသားဖြစ်တည်မှုတရားကို အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာ။ ဒီ မူဝါဒကို ကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဖို့လိုတယ်။
( ၁ ) နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာအကန့်အသတ်ကိုကျော်လွန်စီရင်ခွင့်
သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတခုဟာ မိမိပိုင်နက်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲစီရင်တယ်။ နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ် (ဥပမာ- နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက် ပင်လယ်) ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းညှိတာရှိမယ်။ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတွေမှာတင်ပြီး ဖြေရှင်းတာရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကို စီရင်ရာမှာတော့ ကိုယ့်ပိုင်နက်ထဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ တခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်နက်ထဲမှာဖြစ်လည်း ဝင်ရောက်စီရင်ခွင့်ရှိတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့တိုင်းပြည်က Genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေမရှိဘူး ဆိုရင်လည်း စီရင်မည့်နိုင်ငံက မိမိမှာပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ကို ဝင်ရောက်စီရင် ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါကို extra – territorial power လို့ခေါ်တယ်။
လက်တွေ့မှာတော့ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို ဒီလိုဝင်ရောက်စီရင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပဲရှိတယ်။ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန် စသဖြင့် နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် အမေရိကန်ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံရှိမှ လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထား။ ဒီအချက်က Dr.Lemkin ကိုယ်တိုင်က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အချက်ဗျ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တရာ အော်တိုမန်တူရကီတွေက အာမေးနီးယန်းတွေကို ဂျင်နိုဆိုဒ် လုပ်တုန်းကတည်းက အမေရိကန်တွေရဲ့အသံဟာ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်ရဲ့အသံထက်ကို သြဇာပိုကြီးခဲ့တာ။
ဗြိတိန်ဆိုတာ အဲဒီတုန်းက နေမဝင်အင်ပါယာနော်။ ဒါတောင် ဂျင်နိုဆိုဒ်ကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အမေရိကန်လောက် သြဇာမရှိခဲ့ဘူးရယ်။ ဒါဆို အမေရိကန် တွေက တိုင်းပြည်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ချင်တာနဲ့ Genocide လို့ နာမည် ကောက်တပ်လိုက်ရင်ရောလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အဲလို ဖြစ်မလာပါဘူး။ အမေရိကန်တွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကိုကိုင်စွဲပြီး တခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကို ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ဝင်ရောက်စီရင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီစီရင်ထုံးတွေက အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတရားရေးဌာနမှာ တောက်လျှောက် အကျုံးဝင်သွားမှာပါ။
ဒါဆိုရင် လူဖြူတွေ အမေရိကတိုက်ကို ရောက်လာချိန်ကစပြီး red indian တွေအပေါ်လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ စွဲချိတ်လိုက်ရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ် တိုင်က ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပါ။ ကျန်တဲ့ သြစတျေးလျ တွေလည်း Aborigine တွေအပေါ်လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ဗြိတိန်တွေက နေမဝင်အင်ပါယာတည်ထောင်စဉ် ဒေသခံတွေအပေါ် လုပ်ခဲ့ တာတွေ အဲဒါတွေကလည်း ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအတွက် တစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့အချုပ် အခြာအာဏာကိုသုံးစွဲပြီး ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုစီရင်ဖို့အတွက် တုံ့နှေးစေပါတယ်။ ဒီမှာတင် တစ်နိုင်ငံချင်းစီရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာအစား နိုင်ငံတွေစုပေါင်းပြီး အာဏာလွှဲအပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးအာဏာကို စွဲကိုင်ပြီး စီရင်တဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံးတော် ICC ဟာ အဲဒီသဘောပါပဲ။
( ၂ ) နောက်ကြောင်းပြန်စီရင်ခွင့်
သာမန်အားဖြင့်ဥပဒေတစ်ရပ်ဟာ နောက်ကြောင်းပြန်သက်ရောက်ခွင့် မရှိဘူး။ ဥပဒေမပြဌာန်းခင်က ကိစ္စတွေကို စီရင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒါဟာ principle of non – retrospectivity ။ ဒါပေမဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိုစီရင်ရာမှာ ဆိုင်ရာနိုင်ငံက ဥပဒေကိုမပြဌာန်းထား ရင်တောင် စီရင်ချင်တဲ့နိုင်ငံက ပြဌာန်းပြီးသားရှိနေရင် အဲဒီဥပဒေနဲ့ပဲ ဝင်ရောက် စီရင်ခွင့်ရှိနေတော့ နောက်ကြောင်းပြန် စီရင်ခွင့်မရှိဆိုတာက အားပျော့လာတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင်….
ကိုဆိုဗိုဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခဲ့တာ။ ကိုဆိုဗိုအနေ နဲ့ Genocide Law ကိုပြဌာန်းခဲ့ရင်တောင် ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှအတည်ဖြစ်မှာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုဆိုဗိုရဲ့ဥပဒေပြဌာန်းခွင့်အာဏာဟာ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှ စတင်အသက်ဝင်လာလို့။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၇-၉၈ အတွင်း ကိုဆိုဗိုက ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါ Genocide Law တွေနဲ့ အရေးယူစီရင်ချက်ချတာတွေကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးတော်က လုပ်ထားတယ်။
ဒါဆို ဥပဒေမပြဌာန်းခင်ကကိစ္စတွေကို စီရင်သလိုဖြစ်နေသလား? “““ကိုဆိုဗိုက မပြဌာန်းထားပေမယ့် တခြားနိုင်ငံတွေက ပြဌာန်းထားလို့ ဆိုတဲ့ အဖြေပဲထွက်လာမယ်။ ကိုဆိုဗိုအတွက် နောက်ကြောင်းပြန်သက်ရောက် သလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာတင် Genocide ဥပဒေရဲ့ ထူးခြားချက်က သာမန် ပြည်တွင်းဥပဒေ=domestic law တွေလို စတင်ပြဌာန်းတဲ့ point က တစ်ခုတည်းမက ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါဆိုရင် Genocide Convention ဟာ တရားဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေ ဖြစ်လာတဲ့ ၁၉၅၃ ကိုပဲ စတင်ပြဌာန်းတဲါ point အဖြစ်ယူမလားဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေရှိလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သုံးသပ်ချက်ကသုံးသပ်ချက်သာဖြစ်ပြီး အတည်ပြုချက် မဖြစ်ဘူးရယ်။ Genocide ဥပဒေကို ဘယ်အချိန်ကာလ Point ကစပြီး သက်ရောက် တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာပြဌာန်းချက် မထုတ်ပေးနိုင်သလို ဖြစ်နေပြီးတော့ အတိတ်ကာလကို ပြန်လည်တူးဆွဖို့ လမ်းပိတ်မထားဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဥပဒေတစ်ရပ်ကပြောထားတဲ့အရာဆိုရင် အဲဒီအချင်းအရာကို ပြောတယ်၊ မပြောထားရင် မပြောထားဘူးပဲ။ ဥပမာ-ဥပဒေက အနက်ရောင်လို့ပြောရင် အနက်ရောင်လို့ပဲပြောတယ်။ အဖြူရောင်မဟုတ်ပါလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ Genocide ဥပဒေဟာ သမိုင်းတွေကို တူးဆွပါလို့လည်းပြောမထားသလို မတူးဆွရဘူးလို့လဲပိတ်ပင်မထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ စီရင်ထုံးတွေကတော့ သမိုင်းတွေ (အထူးသဖြင့် မကြာသေးခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေကို) တူးဆွရလေ့ရှိပြီး အဲလို တူးဆွရာမှာလည်း ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ဥပဒေပြဌာန်းတဲ့ အချိန်ကာလ နောက်ပိုင်းကကိစ္စတွေကိုပါ တူးဆွရလေ့ရှိတဲ့အတွက် နောက်ကြောင်းပြန်စီရင် ခွင့်တံခါးဟာ သော့ခပ်မထားဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။
( ၃ ) စာချုပ်စာတန်းများဖြင့်ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှု မရှိခြင်း
ဘိုလိုတော့ no statue of limitations ။ Genocide ရာဇဝတ်မှုကို စီရင်ခွင့်မရှိဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတဲ့ စာချုပ် မရှိပါဘူး။ လောလောဆယ်မြင်အောင်ပြောရရင်တော့ ရောမစာချုပ်ပါပဲ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်တရားရုံးတော်=ICC ကို တည်ထောင်ဖို့အတွက် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ဒီရောမစာချုပ်ဟာ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိ တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ရောမစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ Genocide ဖြစ်ခဲ့ရင် ICC က စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီအချက်က အင်မတန် မှရှင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ “စာချုပ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျတော့စာချုပ်က သက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စာချုပ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုး တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ Genocide ဖြစ်ခဲ့ရင် စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး” လို့ ယူဆခွင့်မရှိပါဘူး။ ရောမစာချုပ်ဟာ စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားကြောင်းပြဌာန်းတဲ့စာချုပ်သာဖြစ်ပြီး စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားကြောင်း ပြဌာန်းထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာချုပ်တစ်ရပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ မထိုးခြင်း ဆိုတဲ့အချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ Genocide ရာဇဝတ်မှုအားစီရင်ခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ခွင့်၊ ချုပ်ြခယ်ခွင့်၊ တားဆီးခွင့်မရှိပါ။
ဒီနေရာမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတန်းများနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကျင့်သုံးတဲ့ principle အရ လက်မှတ်မထိုးရင် အကျုံးမဝင်လို့ ပြန်ထောက်ပြ တာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ principle ဟာ ရောမစာချုပ်အပေါ်သက်ရောက်ရာမှာ ၁၀၀ % သက်ရောက်မှုမရှိဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရောမစာချုပ်ချုပ်ပြီး တည်ထောင်ထားတဲ့ ICC ရုံးတော်မှာကျင့်သုံးတဲ့ဥပဒေတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းက အတည် ပြုလက်ခံပြီးသားဥပဒေတွေဖြစ်နေလို့ပဲ။ ICC ရုံးတော်က ပြဌာန်းကျင့်သုံးတဲ့ war crimes = စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့ဥပဒေဟာ ဂျီနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းမှာ ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်သွားပြီ။
Genocide Convention ဟာလည်း ၁၉၄၈ UN General Assembly မှာ ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲပြီးတာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်သွားပြီ။ ရောမစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမထားလို့ ဒီဥပဒေ တွေနဲ့ စီရင်ခွင့်မရှိပါဘူးလို့ ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ စာချုပ်ဟာ နိုင်ငံရေးအရ ထပ်မံချည်နှောင်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီး မူလဥပဒေကြောင်းအရချည် နှောင်ခြင်းကတော့ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးတဲ့နိုင်ငံအပေါ်မှာရော မထိုးတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာပါ ချည်နှောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လက်မှတ်မရေးထိုတဲ့နိုင်ငံဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအကြောင်းပြပြီး တရားခံကိုလွှဲပြောင်းမပေးချင်ရသော်လည်း ဥပဒေကြောင်းအရ စီရင်ခွင့်ကိုတော့ စီရင်ခွင့်မရှိပါဘူးလို့ ပြောခွင့်တော့မရှိဘူးဗျ။
ဒါဟာ Genocide ကိုစီရင်ရာမှာ သာမန်နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းဥပဒေတွေမှာကျင့်သုံးတဲ့ အကန့်အသတ်စည်းမျဉ်းတွေကို ကျော်လွှားစီရင်ခွင့်တွေထဲကတချို့ပါ။ စီရင်ရာမှာ အကန့်အသတ်တွေကို ကျော်လွှားခွင့်ရှိသလို ဂျင်နိုဆိုဒ် တရားခံတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာမှာလည်း သာမန်ရာဇဝတ်သားတွေရရှိတဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်တွေကို ပယ်ဖျက်ပစ်တာလည်းရှိသေးသဗျ။ ဥပမာ-အထက်အမိန့်အရ လုပ်ရတာပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးတာမျိုးပေါ့။
ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ Genocide Convention နဲ့ကိုက်ညီရင် Legal Genocide=ဥပဒေကြောင်းအရ Genocide ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်။ Genocide Convention ဟာ ဘောင်ကျဉ်းတဲ့အတွက် ထပ်မံဖြည့်စွက်ဖို့ အားထုတ် နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သို့သော် မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ Genocide Convention ကို အချက်အလက်သစ်တွေထပ်မံဖြည့်စွက် ဖို့မအောင်မြင်သေးပေမယ့် တိုးချဲ့သုံးသပ်ပြီး ဘောင်ကျယ်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တာတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ စီရင်ထုံးတွေပါပဲ။
Convention မှာပါတဲ့ တရားသူကြီးတွေရဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဂွင်ထဲက ကိစ္စတွေဟာ ဒီလိုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ဖို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ လုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး ခွင့်ပြုထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက မဏ္ဍိုင် ၄ သွယ်နဲ့ အမှုတွဲကို တည်ဆောက်ပါတယ်။ မဏ္ဍိုင် ၄ ခုလုံးနဲ့ကိုက်ညီမှ Genocide အတွက် အမှုတွဲလို့ရပါတယ်။ အဲဒီ မဏ္ဍိုင် ၄ သွယ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ရခြင်းဟာ နှစ်ပေါက်အောင် ကြာတတ်ပါတယ်။ ခိုင်လုံလို့ အမှုတွဲပြီးရင်တော့ တရားခံဟာ လွတ်လမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကြောင်းအရသုံးသပ်တဲ့ 10 stages of genocide ဟာလည်း အချိန်ယူပြီး လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ ကောက်ချက်ချရတဲ့ကိစ္စပါ။
UN လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်၊ အထူးအစီရင်ခံစာရေးသွင်းသူ၊ HRW, AI စတဲ့အဖွဲ့တွေဟာ အချိန်ယူပြီး အချက်အလက်တွေစုဆောင်း တယ်ဆိုတာ အားလို့ယားလို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Genocide ဆိုတဲ့ term ကို စတင်ဖောက်ခွဲပြီး တရားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေ အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့သဘောလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Genocide ကိုတရားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ရာမှာ လူသိရှင်ကြားမဟုတ်ပေမယ့်လည်း အမြဲလိုလို နောက်ကွယ်ကနေ စီမံခန့်ခွဲသူကတော့ Dr.Gregory Stanton ဦးဆောင်တဲ့ Genocide Scholar တွေပါ။ Dr.Gregory ဟာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ရဝမ်ဒါ၊ ဘော့စ်နီးယားနဲ့ ကိုဆိုဗိုက Genocide တွေကိုအရေးယူရာမှာ တောက်လျှောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာလည်း Genocide Watch ရဲ့ president ပါ။
ဒီ sttatus တွေကိုရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဟာ ဖိနှိပ်ခံရရင် တန်ပြန်တော်လှန်တယ်။ တော်လှန်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြေးမြင်တာက သေနတ်ပဲ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဖိနှိပ်ခံအဖွဲ့အစည်းဟာ Genocide အလုပ်ခံရချိန်မှ လက်နက်ကိုင်ပြီးပြန်ချရင် ဖိနှိပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဂွင်ကောင်းဖန်ပေးသလို ဖြစ်တတ် တယ်။ အကြမ်းဖက်လို့ တံဆိပ်ကပ်ခံရပြီး ပိုနှိပ်ကွပ်ခံရတတ်တယ်။ နောက်ထပ်တော်လှန်နည်းက လမ်းပေါ်တက်ဆန္ဒပြတဲ့နည်းပေါ့။ အဲဒါက activist တွေရဲ့လမ်းကြောင်း။ စစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက လမ်းပေါ် ထွက်ဖို့လုပ်လိုက် ထောင်ထဲဝင်လိုက်နဲ့ သံသရာလည်နေကြတဲ့သူတွေကိုပဲ တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်လို့ မြင်နေရမှကိုး။
Genocide ကို အဲလိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပြီး တော်လှန်လို့မရဘူး။ ဒါဆိုဘာနဲ့တော်လှန်မလဲ။ Genocide ဆိုတဲ့ term ကို စတင်တီထွင်သုံးစွဲပြီး Genocide Convention ကို ပြဌာန်းရာမှာ အစအဆုံး တစ်ကိုယ်တော်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Dr.Raphael Lemkin ရဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တော်လှန်ရမှာပေါ့။ Dr.Lemkin စပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာက ၁၉၃၃ မက်ဒရစ်မှာကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ဥပဒေများကွန်ဖရင့်မှာ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူဟာ ရှေ့နေပေါက်စ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ ပညာတတ်မှုအင်အားနဲ့ စပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာ။ Dr.Lemkin ရဲ့ဥပဒေ ပယ်ချခံရတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့ ကွန်ဖရင့်တိုင်းမှာလည်း တင်လို့ရသမျှတင်တယ်။ ရှေးခေတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်တယ်။ အိမ်နီးချင်း ဆိုဗီယက်အစိုးရရဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ ကိုလည်း အဆက်မပြတ်လေ့လာတယ်။ နာဇီတွေ ဘာလုပ်လာမလဲ ကြိုတင် ခန့်မှန်းစာရေးတယ်။ ဒါက campaign လုပ်တာ။ နာဇီတွေ ပိုလန်ကို ကျူးကျော်တော့ ဆွီဒင်ကတဆင့် အမေရိကန် ကိုရောက်တယ်။ ပညာတော်တော့ အမေရိကန်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အကြံပေးရာထူး ကိုရတယ်။ အမေရိကန်တွေကိုလည်း နာဇီတွေလုပ်လာမဲယ့် အနေအထားတွေကို သတိပေးတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတဆီ တိုက်ရိုက်စာရေးခွင့်ရပြီး ဒုတိယသမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်။ ဒါက lobby လုပ်တဲ့အဆင့်။
ဒါပေမဲ့ Dr.Lemkin ဟာ ဘယ်သူကဖိတ်ကြားဖိတ်ကြား Genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေကိုဆိုရင် သွားတယ်။ ရပ်ကွက်ကျောင်းအဆင့် ကလေးဘက်စ်ကတ်ဘောအသင်းကဖိတ်လည်းသွားတယ်။ ရှင်းပြတယ်။ လူထုကြားပြန်ဆင်းတယ်။ ငါအမေရိကန်အစိုးရထိပ်တန်းအကြံပေး၊ ဒုသမ္မတနဲ့တောင် တွေ့ခွင့်ရသူလို့ မာနမထားဘူး။ နောက်ဆုံး UN General Assembly မှာ ငတ်တလှည့်ပြတ်တလှည့် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အောင်ပွဲရတယ်။ Genocide Convention ရေးဆွဲခွင့်ကို ကုလ သမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်က Dr.Lemkin ကိုပေးအပ်တာ။ ပေါ်လစီဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အဆင့် Dr.Lemkin ရတာ။ ဒီနောက်ပိုင်းလည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကို စာရေးသားဆက်သွယ်တာ၊ လူထုဟောပြောပွဲလုပ်တာ၊ စာအုပ်တွေရေးတာ၊ US လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဆက်သွယ်တိုက်တွန်းတာ တောက်လျှောက်လုပ် တယ်။ ဘယ်သူမှ မထောက်ခံလဲလုပ်တယ်။
၁၉၅၉ မှာ သူကွယ်လွန်တော့ ဈာပနမှာ လိုက်ပို့တဲ့သူတောင် ၇ ယောက်ပဲရှိတဲ့အထိ လူမှုရေးတွေ၊ စီးပွားရေးတွေ ချို့တဲ့ခဲ့ရှာတယ်။ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် သူဟာ
– ပညာတတ်တယောက်အဖြစ် စတင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး
– လူထုကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူအဖြစ် ဆက်လက်အသုံးတော်ခံကာ US အစိုးရအဖွဲ့ကို ထိုးဖောက်တိုက်တွန်းသူလည်း လုပ်ဆောင်ရင်း
– ပေါ်လစီဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အဆင့်ကို ရောက်သွားတဲ့သူ ပညာတတ်မှုကို အခြေခံပြီး အဆင့်ဆင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားတာပါ။
Dr.Lemkin သုံးခဲ့တာက intellectual power ပဲ။ တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ ထိုးဖောက်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်သွားတဲ့နည်း။ စစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ အဲဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကို အမိန့်ပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပညာ ဆိုတဲ့ချွန်းနဲ့ထိန်းပြီး လိုရာကိုခိုင်းတဲ့နည်းပဲ။
ပညာတတ်လူတန်းစားဟာ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ ဟန်မပျက်ထမင်းရှာစားနိုင်တာကလွဲလို့ ဘာသြဇာအာဏာမှမရှိတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ ဒီလိုနည်းနဲ့ ထိုးဖောက်လို့ဘယ်ရမလဲ။ ဒါပေမဲ့ globalization ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ သတင်းအချက် အလက်စီးဆင်းမှုမြန်လာတာတွေကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ အရှေ့ဖျားတိုင်းပြည် မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဝါရှင်တန်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ သိလာနိုင်တဲ့ ခေတ်ကိုရောက်နေပြီ။
ဝါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု=ကမ္ဘာပေါ်မှာ genocide ရာဇဝတ်မှုကို တားဆီးနိုင်သော တစ်ခုတည်းသောစူပါပါဝါနိုင်ငံ။ အဲဒီနေရာကို လက်လှမ်းမှီလာတယ်။ ဒီမှာတင် ဝါရှင်တန်မှာ လက်ရှိအချိန်မှာရော Genocide ကိုတားဆီးဖို့ ထိုးဖောက်ဆောက်ရွက်နေတဲ့သူတွေရှိသလားလို့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…။ မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသူထဲမှာ Genocide လို့စတင် ပြောဆိုတဲ့သူ နှစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ တစ်ယောက်က ဥရောပက scholar ။ နောက်တစ်ယောက်က US က။ သိပ်မကြာခင် US က ပုဂ္ဂိုလ်က ICC ကို အာမခံတယ်။ ၂၀၁၈ ဟာ ICC Year လို့ mandate နဲ့ပြောလာတဲ့သူ။ သူပြောသလို ၂၀၁၈ နှစ်ဦးပိုင်းမှာပဲ ICC ရုံးတော်ရဲ့ စွဲချက်တင်ဥပဒေအရာရှိရုံးက စတင်အလုပ်လုပ်လာတယ်။ အဲဒီ မတိုင်ခင်လေးတင် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးနဲ့ Dr.ယန်းတို့က Genocide လို့နာမည်တပ်နေပြီ။ သေချာတယ်။ ဒါဟာ စနစ်တကျ အကွက်ချပြီး mechanism နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာ။
၂၀၁၈ ကို ICC Year လို့ အာမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝါရှင်တန်ကဆရာကြီးများနဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဆင့်ဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူကိုကြည့်လိုက်တော့ အမေရိကန်ယူတီကာက ကုန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ ပုံစံထက်မပိုဘူး။ ဝါရှင်တန်က ဆရာကြီးများနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူကလည်း သူလိုကိုယ်လို ပုံစံပါလား။
ချမ်းသာတာလည်းမရှိ၊ ရုံးခန်းလည်းမရှိ၊ ရုံးအဖွဲ့ဘာညာလည်းမရှိ။ ဒါပေမဲ့ Dr.Lemkin အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်။ ကုတ်အင်္ကျီ ခပ်နွမ်းနွမ်းဝတ်ထားတဲ့ ဘိုးတော်တစ်ယောက်။ အချိန် တိုင်း Genocide အကြောင်းပြောနေတဲ့ လူတစ်ယောက်။ အဲဒီထက်ဘာမှ ပိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ မပိုလို့လည်း သူဆုံးတော့ ဈာပနမှာတောင် လူ ၇ ယောက်ပဲရှိတာ။
Genocid ရာဇဝတ်မှုကိုဖြိုချဖို့ လုပ်တဲ့ fighter တွေဟာ ငွေကြေး တအားချမ်းသာနေစရာမလိုဘူး။ နောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းတွေ တအားတောင့်တင်းနေဖို့မလိုဘူး။ အဲ… ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်။ အသိဥာဏ်နဲ့ယှဉ်တဲ့ သတ္တိရှိဖို့လိုမယ်။ အဝတ်အစားနွမ်းရင်နွမ်းမယ်။ စိတ်ဓါတ်ကထက်သန်မယ်။ အပေါင်းအသင်း တအားများချင်မှများမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစိုက်မတ်မတ် အလုပ်ထဲနှစ်ရမှာကိုး။
ဒါဆို ယူတီကာက ကွမ်းမာမူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်က… ဒါ fighter တွေရဲ့ ပုံစံပဲ။ အဲဒီမာမူနဲ့ Dr.Gregory ကြားက E.mail တစ်ခုကို ကျွန်တော်တွေ့မိတော့သူ့ကိုပြပြီး Dr.Gregory နဲ့ ဘယ်လိုပတ်သတ်လဲမေးတယ်။ သူက သူ့ဆရာ အရင်းပါလို့ပြောတယ်။ “Dr.Gregory ဆိုတာ Genocide ကိုင်တွယ်မှုနဲ့ပတ်သတ်ရင် Dr.Lemkin နောက်ပိုင်း အများဆုံးအလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သူလို့ ပြောလို့ရသူ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားဆရာအရင်းဆိုတာ ဘယ်လိုယုံရမလဲ” ဒါကကျွန်တော့်မေးခွန်း…။ သူက အထောက်အထားတချို့ပြတယ်။ ကျွန်တော်က ဆက်တိုက်ဆက်မေးတယ်။ သာမန်လူဆို တအားကြီးလည်းမခင်ဘဲ ဒီလောက်မေးခွန်းတွေ မေးတာ ဂြိုဟ်ကြွသွားနိုင်တယ်။ သူကတော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေတယ်။
သူ့အဖြေတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ပီတိတစ်ခုရတယ်။ မြန်မာပြည် အတွက် Dr.Lemkin ခင်းပေးတဲ့ ပညာတတ်မှုအင်အားနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လမ်း ကြောင်းပွင့်နေပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ ပီတိ။ အဲဒီအသိနဲ့ ပီတိကို ကျွန်တော်မျှဝေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့အသိက နည်းနည်းလေးပဲ။ ပညာဆိုတဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့ တံခါးပေါက်ဝကိုတောင်မရောက်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ တံခါးဝကို ခပ်ရေးရေးလေးလှမ်းမြင်နိုင်အောင်တော့ ကျွန်တော့်စာလေး တွေက မျက်စိဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဆက်လက်တိုးချဲ့လေ့လာရင်း အသိကိုဖြည့်ဖို့ ခိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ အဲဒီအသိတွေ ကိုရရင် ပီတိကို ဆက်လက်ခံစားရမယ်။ ခံစားမိစေချင်တယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒီစာတွေကိုရေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။